Kotatsu sa Korsy? Japoney sa Iraniana izao fomba fanafanana tena izao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2015 6:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, Italiano, 日本語, اردو, English
Vehivavy Japoney ao amin'ny Kotatsu-n'ny efitra fandraisambahininy. Sary avy amin'ny kaonty Twitter Panda Leo.
‘Japoney sa Iraniana?’ hoy ny fanontanian'i Golnoush Niknejad, Iraniana-Amerikanina mpanao gazety taorian'ny namakiana ny lahatsoratr'i Bored Panda [Panda Leo] tamin'ity “zava-noforonina Japoney mahafinaritra ity” izay antsoina hoe kotatsu.
Raha heverina ho toy ny zava-baovao noforonina aza ity teknika fanafanana ambany latabatra norakofana bodofotsy ity ho an'ny hafa, dia teknika mahazatra sy nentin-drazana kosa izany ho an'ny Iraniana.
Fandrehefana Korsi afon-tsaribao nentin-drazana ao Iran tany amin'ny fanombohan'ny taonjato faharoapolo. Sary avy amin'ny Wikipedia, CC0 1.0.
Tsy amin'ny anarana kotatsu no iantsoan'ny Iraniana azy fa korsy, ary manana anjara fototra amin'ny fombafomban'ny miraalin'ny ririnina fantatra amin'ny anarana hoe Shab-e Yalda.
Tsy mazava ny hoe iza no namorona azy voalohany fa ny fikarohana haingana amin'ny endriny Iraniana no manome ny valiny hatrany amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo. Mary amin'ny Iraniana no mitazona fahalalana ara-lovantsofina, mampiaraka azy amin'ny tarana-panjakana Iraniana Qajar tamin'ny taonjato faha-18. Ny iditra Wikipedia amin'ny kotatsu, kosa anefa mametraka ny famoronana ho any amin'ny taonjato faha-14.
Raha tsy jerena izay nahatontosa azy voalohany, dia hita taratra fa manana tekinika mitovy fototra i Japana sy i Iran rehefa amin'ny fampahazoana aina mandritra ny ririnina.